Kuze kube manje, phakathi izifo human eziningi laziwa umkhuhlane emathunjini. Izimpawu, izindlela zokwelapha ziye eside wafunda imithi futhi musa ngihluphe abanye abantu. Qamba umkhuhlane wakho emathunjini kwaba yingenxa izimpawu zaso zifana kakhulu umkhuhlane abavamile - umphimbo obuhlungu, Ukugodola, imfiva kanye nobuhlungu bomzimba wonke umzimba.
"Hlobo luni isifo akunjalo?" - ubuza. umkhuhlane emathunjini (noma, ngamanye amazwi, Rotavirus ukutheleleka) - isifo i nature esithathelanayo isifo ekuqaleni kuhlanganiswe syndrome emathunjini bese zokuphefumula. Rotavirus - Amagciwane amelana kakhulu izici zangaphandle, zingabantu bangakhathaleli muntu ngokuphelele acid kanye formalin, futhi ingaqhubeka infective isikhathi esingaba iminyaka emibili. Ngakho-ke, ukwelapha umkhuhlane emathunjini kufanele wasondela njengento ebaluleke kakhulu.
I esiyingozi kakhulu umkhuhlane emathunjini ngoba asebekhulile futhi abasha. Ochwepheshe basalokhu bengakakwazi ukuthola ukuthi kukhona umuntu asinde ku lesi sifo, uma wayeke wahlupheka. Othile ehlupheka i umkhuhlane emathunjini kanye kuphela endaweni esaphila, kuyilapho abanye isizini ngayinye ucosha le lokudlela.
umkhuhlane emathunjini: izimpawu, ukwelashwa.
Ukuqhubeka kwesifo iyafana umkhuhlane futhi umkhuhlane: emphinjeni abavusa, ngokuvamile uba nemfiva futhi amakhala yisisu livela. Ngemva kwamahora angu-12-15 avele ketshezi amaningi, igwebu, engcolile kamnandi izigqiki, ubuhlungu besisu, ngezinye izikhathi ukuhlanza, - emathunjini izimpawu zomkhuhlane uphethwe bendabuko. Ukwelashwa akufanele yephuza kamuva, ngoba umzimba echayeke Ngenxa yokugula ukudakwa, futhi lokhu kuyingozi kakhulu. Ukwelashwa siqukethe nokuphathwa namalahle isebenze nezinye absorbents nokulandela Ukudla yezokwelapha esiqinile. Kuyadingeka ukuvimbela amanzi emzimbeni - aphuze kakhulu ketshezi ngangokunokwenzeka, itiye ngisho nosawoti evamile. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezincane, ngoba kubo, amanzi emzimbeni okuholela sohudo kuyingozi kakhulu. Grudnichka ningathandi unathe ibhodlela, desoldering spoon noma isipetu. Ungase futhi ukunikeza elungisiwe izithelo compote noma umhluzi okhalweni.
Le ndoda iza emuva evamile nje kwezinsuku ezimbalwa, kodwa namanje kuyinto umthombo ukutheleleka kwabanye abantu. Ngakho zama ukuya kuphi isikhashana, ukuze ngingasebenzisi ukuthelela abanye, ngoba lolu hlobo UMKHUHLANE kalula ngocansi kukhanyisa amaconsi sisemoyeni futhi ngokusebenzisa izinto zangamalanga. Sneezing eduze othile, unga, engazi, "umvuzo" umuntu nalesi sifo. Ingase futhi itheleleke ngokusebenzisa amanzi yobisi ukudla. Othwala igciwane kungaba umuntu ngokuphelele abaphilile Akazi nakwazi ukuthi ngakho. Ngokuvamile, kuyingozi futhi ngobuqili emathunjini izimpawu zomkhuhlane (ukwelashwa) Ngokuphambene, izinganekwane ilula.
Ukuvimbela imfuluwenza emathunjini
Ukuze lesi sifo kuyelelwe bonyana akukafaneli kuphulwe izinhlelo zakho futhi nje akazange bonakalise kwemizwelo, bagcine imithetho aphansi elula. Ukuze kuvikelwe Qiniseka ukuthi ugeza izandla zakho ngaphambi kokudla, futhi bathenge imikhiqizo, hlola okungapheli. Uma ungabaza uthenge njengoba kungase imifino nezithelo kumele bazifake amaminithi angu-10 e-acid isixazululo acetic (3%).
Ungafaki off kudokotela wezifo uma esolwa noma ingane yakho ine izimpawu zezifo ezingemnandi ezifana umkhuhlane emathunjini. Izimpawu, impatho akubangi nobunzima phezu ingxenye imithi, futhi udokotela oqeqeshwe ngokuphelele ngesisekelo uchungechunge lwemibuzo futhi qiniseka bona ukuhlolwa ukukusiza ukuxazulula le "isitha."
Ukuze uthuthukise ukungatheleleki zomzimba kufanele athathe njalo Vitamin izakhiwo, ikakhulukazi ebusika futhi ngesikhathi ushintsho zonyaka.
Nakho-ke wena nakanjani asesabi isifo esinjengo umkhuhlane emathunjini!
Uketshezi lwamalunga. Artrotsentez
Xeroderma pigmentosum: izimbangela, izimpawu, incazelo kanye izici ukwelashwa
Lymphadenitis ingane: izimbangela, izinhlobo, izimpawu, ukwelashwa
Kuthiwani uma ingane engasaphefumuli ekhaleni?
Inhalation ngesikhathi sokukhulelwa
I-Jeans Philipp Plein: incazelo nokubuyekeza
Cuisine Ukraine: ubhekeni kulolo ketshezi, ukupheka zokupheka
"Zone Kuso." Abalingisi, owayevakashela Zone of Lokho
Indlela yokwenza ye-origami iphepha? Rose - imbali uthando
Gene - Iyini? Amazing kanye Amazing isayensi yezakhi zofuzo
Kirov Medical Institute. Kirov: Uhlu amanyuvesi. Kirov Medical Academy
I grey ndaba zobuchopho nomgogodla grey ndaba
Anastasia Mikulchina - Biography, Filmography futhi abadlali umndeni (isithombe)
Adenomyosis futhi endometriosis - yini umehluko? Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini endometriosis adenomyosis